खराब मार्केटरहरू विरूद्ध खराब मार्केटरहरू
शुक्रबार, जुलाई 2, 2010 आइतबार, जुन 21, 2015 Douglas Karr
म शहरको पश्चिम तर्फ ड्राईभ गर्दै थिएँ, बिलबोर्डमा हेरीरहेथें, र त्यहाँ उपकरणहरूका लागि बिलबोर्ड थियो। बिलबोर्ड एक विशिष्ट विज्ञापनको सट्टामा, विज्ञापन मैदानमा गए। एउटा आर्मले पोस्ट छोडे र वास्तविक उपकरण बिलबोर्ड क्षेत्रमा थियो। यस्तो देखिन्थ्यो कि हात भुइँबाट बाहिर आउँदैछ। यदि मलाई हतौडीको खाँचो परेको थियो भने, म शायद यो ब्रान्ड सम्झन सक्दछु र सायद यो किन्नु हुन्थ्यो।
इन्टर्नेटमा, म प्रासंगिक विज्ञापन पाउँदा कृतज्ञता गर्दछु जब म सर्च गर्दैछु। मँ वास्तवमा एक विज्ञापनदाता मा उन्नत कुञ्जी शोध अनुसन्धान, मलाई ट्र्याक, र मलाई प्रासंगिक विज्ञापन प्रदान मलाई Google मा भन्दा एक प्रासंगिक परिणाम प्रदान मलाई भन्दा अधिक प्रासंगिक मा अधिक विश्वास छ।
म विज्ञापनदाताहरुलाई धेरै व्यक्तिगत जानकारी दिन चाहान्छु। म यो गर्छु ताकि उनीहरूले मलाई अझ राम्ररी बुझे र मेरो डेमोग्राफिक्ससँग मेल खाने विज्ञापन प्रदान गर्नुहोस्। म स्मार्ट विज्ञापन चाहन्छु। म बौद्ध मार्केटिंग रणनीति चाहन्छु। म अझै रचनात्मक मार्केटि or वा विज्ञापन अभियान मन पराउँछु जसले मलाई पीछा गर्न सक्षम छ, मेरो ध्यान खिच्न, र मलाई मेरो माउसको माथि औंला होभर गराउँदछ।
के म एक्लो छु? म अब लगभग सबै अनलाइन को लागी किनमेल गर्छु। यदि मैले आफ्नो जीवनमा कहिल्यै अर्को स्टोरको भ्रमण गर्नुपर्दैन भने, म गर्दिन। जब म एक विज्ञापन देख्छु र म किन्न तयार छु, म त्यसमाथि निस्काउँछु। मलाई मार्केटिंग मन पर्छ र म विज्ञापन मन पराउँछु।
म विश्वास गर्दछु कि आलसी मार्केटरहरूको कारण मार्केटिंग र विज्ञापनको नराम्रो रेप हुन्छ। रचनात्मकता जोखिममा पार्नु वा व्यक्तिगत र लक्षित गर्न थप उचित लगनशीलता गर्नुको सट्टा, उनीहरूले सकेसम्म धेरै आँखाको अगाडी आफ्नो बकवास बढाउँछन्।
महान मार्केटरहरू कुन दिशामा तपाईं हिंड्दै हुनुहुन्छ भन्ने पत्ता लगाउन सक्षम छन्, यदि तपाईं तिनीहरूको दिशामा जाँदै हुनुहुन्छ भने, तिनीहरूले तपाईंलाई सिधै अगुवाई गर्छन्। यो झिंगी माछा मार्ने जस्तो छ ... माछा भोकाएको छ र लोभ उनीहरूको वरिपरि लुकिरहेको छ यो काट्ने दूरी भित्र हो सम्म। डरलाग्दो मार्केटरहरूले केवल नेट निकाल्छन्। पर्याप्त नेतृत्व प्राप्त गर्न सक्दैन? ठूलो नेट! अझै सक्नुहुन्न? थप जालहरू! तिनीहरू आफ्नो माछा तान्न को लागी तिनीहरू पनी संघर्ष गर्दै र हत्तपत्त गर्दै गर्दा टाढा।
अनि तपाईंँलाई नि? के तपाईं अझै उत्कृष्ट बजार र विज्ञापनको कदर गर्नुहुन्छ?
टैग: बोर्डबिलबोर्ड विज्ञापनखोजशब्द अनुसन्धानअनलाइन विज्ञापनट्र्याकिङ
जुलाई,, २०१ at 2::2010। बिहान
यो सबैभन्दा राम्रो र रचनात्मक मार्केटिङ हो जुन मलाई याद छ। म बाँकी ट्युन आउट गर्छु किनभने यो धेरै नरम भएको छ।
इमानदारीपूर्वक भन्न सक्छु कि म उत्कृष्ट विज्ञापनको कदर गर्दिन, यो जतिसुकै लक्षित भए पनि। वास्तवमा, विज्ञापनदाताले जति धेरै मलाई लक्षित गर्ने प्रयास गर्छ, त्यति नै म पछि हट्छु। धेरै माइक्रोसफ्ट उत्पादनहरू प्रयोग गरेर यो एक समान अनुभव: तिनीहरूले मैले के चाहन्छु (हेर्नुहोस्, स्वत: ढाँचा!) अनुमान गर्न धेरै प्रयास गर्छन्, तर तिनीहरूले यसको राम्रो काम गर्दैनन्।
त्यस्तै ब्रान्ड विज्ञापनको लागि जान्छ जसले प्रत्यक्ष बिक्रीलाई उत्प्रेरित गर्ने प्रयास गर्नुको सट्टा ब्रान्डसँग सम्बन्धित मुड सिर्जना गर्ने प्रयास गर्दछ। सबै भन्दा राम्रो यो अप्रभावी, सबैभन्दा खराब यो भ्रामक।
मेरो लागि, विज्ञापनदाताहरूले विज्ञापन गर्दा तिनीहरूको ब्रान्डलाई बढी नोक्सान गर्छन्। मलाई लाग्छ कि तिनीहरूले थोरै भ्रामक हुन खोजिरहेका छन्। र गहिरो तल, मलाई लाग्छ कि धेरै मानिसहरूले यस्तै महसुस गर्छन्। तिनीहरूले विज्ञापनदाताका उत्पादनहरू निरुत्साहित रूपमा किन्छन्, तर विकल्पहरू अवस्थित हुँदा अधिक इमानदार र पारदर्शी ब्रान्डहरूबाट किन्न रुचाउँछन्।
मलाई लाग्छ कि विज्ञापन उद्योगलाई स्वीकार गर्न गाह्रो छ, तर धेरै च्यानलहरू र प्रविधिहरू अब विज्ञापनहरू सेवा गर्न समर्पित भएकाले, सबै विज्ञापनहरूको मूल्य घट्दै गएको छ; यहाँ सम्म कि "राम्रो"।
Deckerton, यो एक महान परिप्रेक्ष्य हो! म जिज्ञासु छु, यद्यपि, कति मार्केटिङ र विज्ञापनहरू जुन तपाईं वास्तवमा साक्षी हुनुहुन्छ कि तपाईंलाई सूक्ष्म रूपमा सञ्चार गरिँदै हुनुहुन्छ भनेर पनि थाहा छैन!
म तिम्रो साथमा छु, डग! विज्ञापनहरू मेरो प्राथमिकताहरूसँग सान्दर्भिक हुँदा र रचनात्मक तरिकामा मेरो ध्यान खिच्दा म यसको कदर गर्छु। वास्तविकता के हो भने, म चीजहरू किन्छु... र राम्रो विज्ञापनले मलाई मेरो लागि सान्दर्भिक उत्पादनहरूसँग जडान गर्न सजिलो बनाउँछ।